Musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle" Dowladan waxa ay ku fiican tahay propagandada mana jirto wax deyn ah oo la Cafiyay" - Awdinle Online
Musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle” Dowladan waxa ay ku fiican tahay propagandada mana jirto wax deyn ah oo la Cafiyay”
Musharax Madaxweynaha Soomaaliya Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa weerar afka ah waxaa uu ku qaaday dowladda waqtiged auu sii dhamaanayo ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Musharax Jibriil oo ka hadlayay howlaha deyn cafinta oo ay ku cel celiyaan Madaxda dowladda ayaa sheegay in Howsha deyn cafinta Sideed sano kahor ay soo bilaabeen madaxdii ka horeeysay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaa uu sheegay in waxba aan ka jirin wararka ay Madaxda dowladda mar walba sheeg sheegaan ee ah in Soomaaliya deyn laga cafiyay, hayeeshee uu sheegay in dowladaha qaar sida dowlada Norwey ay Soomaaliya ka bixisay deyn lag lahaa.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in mararka qaar wararka ay sheegayan madaxda dowladda ay Qatar ku yihiin dalka oo dhibaato dambe ay u keeni karto isaga o ugu baaqay inay joojiyaan.
Previous articleGalmudug oo ku dhawaaqday in dad loo qabtay qarixii Gaalkacyo
Next articleDastuurka Soomaaliya oo dhacaya & Xasan Sheekh oo qoraal kasoo saaray